Gbasara Anyị | Shijiazhuang QiAOQi Glass Product Co., Ltd.
Nabata na QioaQi
QiAOQi Manufacturer lebara ogo anya dị ka ihe dị mkpa maka mmepe ụlọ ọrụ. Site na nhazi nke akụrụngwa anyị ruo na mmecha nke ngwaahịa ikpeazụ, anyị na-etinye aka na mma, ihe ọhụrụ na ọchịchọ ị gabiga mkpa ndị ahịa. Anyị nwere usoro njikwa njikwa siri ike, a ga-enyocha ngwaahịa niile nke ọma ma ọ dịkarịa ala ugboro 3 (n'oge mmepụta, rụchara ọrụ na tupu ị na-ebu ya site na QC) nke na-enyere anyị aka ịkwado na afọ ojuju ndị ahịa. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enye ndị ahịa mkpesa n’oge nke na-enyere anyị aka ịkwado afọ ojuju ndị ahịa zuru oke.
Njikwa ụlọ nkwakọba ihe
QiAOQi Manufacturer nwere ihe karịrị 5,000 sqm nkwakọba ngwaahịa ngwaahịa. Ndị ọrụ nkwakọba ihe anyị ọkachamara abụghị naanị na-adị ọcha, lelee nọmba ahụ, kamakwa hụ na nkwakọ ngwaahịa ahụ. E wezụga nke ahụ, ngwongwo ngwongwo niile dịka iwu dị iche iche si dị. Ọ bụ anyị mgbe niile na-achụ ike magburu onwe ya mma ngwaahịa.
Jupụta na Mmasị na Ike nke Ndị Ahịa Ahịa
Ndị na-eto eto na ndị ọrụ aka ọkachamara na - arụ ọrụ 7X24hours, ndị nwere ike ịnye nzaghachi oge na ezi.
Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ụlọ ọrụ a, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ọkachamara kachasị na mmepụta.
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ a, anyị ga-enye gị asọmpi ego na oge kacha mma nnyefe.
Ndị ọrụ nke QiAOQi na-atụ anya isonyere gị iji mepụta ọdịnihu magburu onwe ya site na amamihe anyị, agwa anyị na ngwaahịa anyị.